Zuza kanye nokulimala | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Zuza kanye nokulimala
Kelp omisiwe: izinzuzo kanye nokulimala
Izilwane eziningi zasolwandle kubhekwa njengomkhiqizo "wamateur". Lokhu kuyiqiniso kuphela - empeleni, banamakhemikhali amaningi asebenzayo angasiza kuwo wonke umuntu. Futhi phuma kuloluhlu kukhona ama-algae. Sifunda kabanzi ngenye yalezi zitshalo, thola ukuthi yiliphi i-kelp elomile eliwusizo, futhi yiziphi izindlela zokungeniswa okuvunyelwe ukusetshenziswa.
U-Usneya ubhedu: izindawo zokwelapha ze-lichen
I-Usneya ndearded iyinhlama, ewumuthi oqinile wemvelo. I-Lichen thalli isetshenziselwa ukuvuselelwa, ukwelashwa kwezifo ezihlukahlukene. Kusukela ezikhathini zasendulo, kwaziwa ngezindawo ezizuzisayo zesitshalo. Izindlela zokupheka zokwelapha ziye zanikezwa kusukela esizukulwaneni kuya esizukulwaneni futhi zisinda kuze kube yilolu suku. Incazelo ye-Botanical ye-Usnea i-bearded iyinhlama ene-thallus ende, efana nesilevu (ngakho-ke igama).
Kuyini amafutha esame ewusizo omzimba womuntu
Isitshalo sesame nesinegama elihle lesiLatini igama liye laheha abantu iminyaka engaphezu kweyodwa ngenxa yezindawo zayo ezizuzisayo kanye nenani lamandla. Ithole isicelo esikhulu ekuphekeni, imithi yendabuko, i-cosmetology. Sebenzisa imbewu yayo kanye namafutha. Ngezinzuzo kanye nokulimaza kwenkulumo yokugcina eqhubekayo.
Ngamunye wethu usebenzise usawoti nsuku zonke, ngaphandle kwalokho okungathi noma yikuphi ukudla okubonakala kungenakwenzeka. Ngezinye izikhathi singakwazi ukuyibeka esikhundleni sesiphuzo se-flavouring, kodwa-ke inani elithile lalezi zimaminerali lizobe likhona kuzo. Ngaphandle kosawoti, akunakwenzeka ukulondoloza imifino, inyama noma inhlanzi. Namuhla sizofunda kabanzi ngalokho okushiwo lo mkhiqizo, kungani kubalulekile emzimbeni wethu, nokuthi ngabe kukhona ukuxhumana phakathi kwesisindo kanye nenani likasawoti elidliwe.
Amafutha omthamo: yini ewusizo, indlela yokuqhakazila, ukuthi yini okufanele uyenze nayo
Uhlu lwemikhiqizo yokudla lukhulu kakhulu kangangokuthi kungaba nzima kakhulu ukuluhlula, ikakhulukazi ucabangela ukuthanda okuthandwa yizinhlobonhlobo zezinhlanga ezihlukahlukene. Esihlokweni sethu sizoxoxa ngeminye imikhiqizo engavamile - i-lamb fat (noma umsila we-fat), engavamile kakhulu ensimini ye-Ukraine ne-Russian Federation njengamanye amazwe emhlabeni.
I-Cinnamon enezinyosi: izakhiwo eziwusizo nama-contraindications, zokupheka
Ngezinhlungu emphinjeni, emakhazeni, ngezinhloso zokuzithokozisa futhi nje nje njengomsunguli ushukela, uju usemotweni cishe cishe wonke umuntu ohlala naye. Okufanayo kusebenza nesinamoni esiphundu, ngaphandle kwalokho kunzima ukucabanga ngamakhekhe amahle noma iwayini elifudumele. Ngokuvamile sisebenzisa le mikhiqizo ngokwehlukana. Kodwa ngo-pair, bangakwazi ukuletha inzuzo eningi, esizoxoxa ngayo ngokuqhubekayo.
I-Cinnamon Milk Yokunciphisa
Ukuphumelela kwesisindo ukupheka inzalo iningi abesifazane, ngakho cishe bonke bazama ukuthola indlela efanelekayo ngokwabo. Okungaziwa kakhulu ngezinzuzo zesinamoni endabeni yokulahlekelwa isisindo, kodwa lokhu akude nalokho umuntu wonke azi ngakho ngesenzo saso ngokubambisana nobisi. Siphakamisa ukuthi ucabangele lolu khetho lwesiphuzo esiwusizo futhi ufunde kabanzi mayelana nezakhiwo zalo.
Kungani i-garlic iphunga ivela: ukuphuma kwabesifazane, emlonyeni, ngokuthuthumela, emzimbeni noma kumchamo? Ingabe kuyingozi futhi kanjani ukuhlanza?
I-honeysuckle edliwayo: ukubukelwa ngamafuphi kwezinhlobo ezinhle kakhulu zokukhula ezifundeni ezahlukahlukene
Ubukhazikhazi obukhazimulayo bamahlahla e-barberry engadini: izinhlobo nezinhlobonhlobo